Wararka Maanta: Axad, Sept 27, 2020-Dooni ay la socdeen muhaajiriin Soomaali ah oo ku degtay xeebaha Libya
Kalluumeysatada Liibiya ayaa arkay doon degtay gelinkii dambe ee maalintii Khamiistii todobaadkii hore, waxayna ku guuleysteen inay 22 qof ka soo saarto biyaha.
Muhaajiriintaan ayaa ka kala yimid Masar, Bangaladesh, Suuriya, Soomaaliya iyo Ghana.
Doonida ku degtay xeebta Liibiya ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 16 muhaajiriin ah, waxaana maydkooda la helay saddex qof oo ay ku jirto haweenay Suuriyaan ah.
Ugu yaraan 13 kale oo muhaajiriin ah ayaa weli la’yahay iyadoo loo maleynayo in ay ku hafteen biyaha, sida ay sheegtay hay’adda socdaalka adduunka ee IOM.
Ilaalada Xeebaha Liibiya ayaa ka digay in tirada dhimashadu ay sii kororto maadaama kooxaha baadi goobka ay baarayaan aagga shilku ka dhacay si ay u helaan dhibanayaal badan.
9/27/2020 11:12 AM EST